Yimiphi imithetho ye-Airbnb mayelana nezikhali endlini? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Yimiphi imithetho ye-Airbnb mayelana nezikhali endlini?
Okuthi Amazinga Nokulindelekile kudinga ukuthi zonke izikhali ezikhona endlini kufanele zigcinwe kahle futhi zivikeleke. Uma isikhali sibonakala ngokucacile noma singatholwa yizivakashi, ababungazi kudingeka bakucacise lokhu Emithethweni yabo Yendlu. Izivakashi nazo kudingeka zinikeze isaziso futhi zithole imvume yanoma iziphi izikhali ezivikelekile ngaphambi kokubhukha, futhi kufanele zisebenzise uhlu lokuthumela imiyalezo ukwenza kanjalo.
Uma ngabe isaziso sangaphambi sesikhali esivikelekile singanikezwa futhi umbungazi noma isivakashi sikhetha ukukhansela ukubhukha, i-Airbnb izovumela ukukhansela ngaphandle kwenhlawulo.
Qaphela: Zonke izikhali ezikhona endlini kumele zivikeleke kungakhathaliseki ukuthi zidaluliwe yini. Abantu abaphula lokho okulindelekile bangamiswa noma basuswe kusayithi.
Noma iyiphi into engadubuleka ibonakala njengesikhali. Lokhu kuhlanganisa, kodwa akukhawulelwe kokuthi: Izibhamu ezijwayelekile, izibhamu zomoya, ezokuzivikela noma amadivaysi okuzilwela noma isisi esikhalisa unyembezi, izinhlamvu zanoma yiluphi uhlobo, nezibhamu zokulingisa.
Izinhlobo ezamukelwe zokugcina okuphephile
Izikhwama ezivaliwe noma amakhabhinethi namadivaysi okukhiya abonakalayo yizinketho zokulondoloza ezamukelekayo. Isitoreji esiphephile kufanele siqinisekise ukuthi abasebenzisi abagunyaziwe kuphela abanokufinyelela.